Hubinta Caafimaadka Koontada -
Sida jirka bini'aadamka uu ugu baahan yahay baaritaan caafimaad oo joogto ah si uu u koro una horumariyo una noolaado nolol dheer, koontada ganacsigu waxay sidoo kale u baahan tahay baaritaan joogto ah oo ku saabsan 'caafimaadkiisa'. Maaddaama ujeeddada kama dambaysta ah ee ganacsi kasta ay tahay in la koro oo la barwaaqoobo iyada oo loo marayo horumarka joogtada ah ee iibka, waxaa aad muhiim u ah in la helo kobcitaankan iyada oo aan wax jajab ah ama xannibaado ahi jirin. Caafimaadka koontada iibiyaha wanaagsan wuxuu la mid yahay iibka wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, la socoshada qiyaasaha kala duwan ee caafimaadka koontada iibiyaha waxay noqon kartaa hawl adag. Tani waxay noqoneysaa xitaa mid aad u dhib badan sababtoo ah suuqa ballaaran ee ganacsiga internetka. Si aad u hesho taageero kugu hagta oo kaa caawisa sidii aad u ilaalin lahayd isu dheelitirka u dhexeeya Heerka Amarka Xaddidan, Sicirka Daba-galka, iyo heerka ka-hor-joojinta iyo helitaanka iib wanaagsan ayaa noqon kara kor u kac weyn ganacsiga oo mustaqbalka fog ka hortagi lahaa joojinta koontada
Kooxdayadu waxay kaa caawineysaa inaad ilaaliso caafimaadka koontadaada Amazon isla markaana kugula taliyo inaad ilaaliso cabirka saxda ah ee xuduudaha soo socda:
Dalbo tilmaamaha dhimista cilladda
Habka adeegga macaamiisha
Wax ka qabashada joojinta horay u-tirinta
Hubinta caafimaadka koontadu kaliya maahan in koritaanka shirkaddu ahaado mid joogto ah, wuxuu kaloo caawiyaa joogtaynta xiriir wanaagsan oo lala yeesho macaamiisha. Kooxda APlus Global waxaa ka go'an inay ganacsiga e-commerce ka dhigto mid u siman sida ugu macquulsan dhammaan.